टिकटकमा भाईरल जोडी सुरज-सिमा पहिलो पटक मिडियामा । लोभलाग्दो प्रेमदेखि झगडा, हसाएरै मुर्छा पारे (भिडियो हेर्नुस) – Online Khabar 24
टिकटकमा भाईरल जोडी सुरज-सिमा पहिलो पटक मिडियामा । लोभलाग्दो प्रेमदेखि झगडा, हसाएरै मुर्छा पारे (भिडियो हेर्नुस)
पारिवारक र समसामयिक बिषयमा भिडियोहरु बनाएर निकै नै चर्चामा आएका बिराटनगरका सिमा र सुरज अधिकारी मिडियामा आएका छन् ।
दर्शकहरुलाई निकै हसाउने सुरज र सिमाको जोडीलाई सबैले माया गर्दछन् । बिगत एक बर्षदेखि टिकटक बनाउँदै आएका यो जोडीलाई शिशिर भण्डारीले मिडियामा ल्याएका हुन् । पेशाले सुरज शिक्षक हुन् । यता सिमा भने घर गृहणी हुन् ।
उनीह्रुको एक बच्चा पनि छन् । सुरज आफ्ना बिद्यार्थीहरुलाई पनि हसाएरै पढाउने गर्दछन् । धेरै बिद्यार्थीको पिैय शिक्ष हुन्, उनी । सुरज र सिमाका भिडियोहरु टिकटकमा लाखौंले हेरेका छन् । उनीहरुलाई हालसम्म झण्डै ७ लाखले टिकटकमा पछ्याएका छन् ।
सुरज र सिमालाई टिकटककै कारण अहिले धेरैले चिन्दछन् । रमाईला सुरजले सिमालाई बिवाह गरेपछि उनी पनि त्यहि स्वभावको भईन् । वास्तवमा सिमा सुरजको रमाईलो स्भावमै मोहित भएकी थिईन् ।
बिहेपछि श्रीमान श्रीमतीको सल्लाहमा पारिवारिक र सामाजिक बिषयमा गनथन गरेर भिडियो बनाउने सोच सुरजले बनाए । सुरु सुरुमा सिमालाई गाह्रो लाग्थ्यो तर पछि उनी पनि जान्ने भईन् । अन्तर्वार्ता पनि उनीह्रुले निकै हसाए ।भिडियो हेर्नुस
Prevअाज कतै जादै वा केही काम गर्दै हुनुहुन्छ भने जान्नुस अाजको तपाँर्इको भाग्यफल !
nextनियमित यौ Yyनसम्पर्क राख्ने व्यक्ति कमजोर हुन्छ कि झन् बलियो ? यस्तो छ निष्कर्ष